China Discount Smart Home Light Wifi Switch ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများ
1. Smart Home Light Wifi Switch ၏ ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
Smart Home Light Wifi Switch သည် tempered glass touch panel နှင့် fire retardant PC substrate ကိုအသုံးပြုထားပြီး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ခြစ်ရာဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ စိုစွတ်မှုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ မီးငြှိမ်းသတ်ခြင်း၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း။ ဒါကြောင့် Environmental-friendly and energy saving ပေါ့။ သမားရိုးကျ နံရံခလုတ်ကို လုံးဝ ချောမွေ့စွာ အစားထိုးပါ။ အိမ်၊ ရုံး၊ ဟိုတယ်၊ ဆေးရုံ စသည်ဖြင့် သင့်တော်ပါသည်။
Smart Home Light Wifi Switch သည် 1/2/3 gang touch control tempered crystal glass panel wall switch ဖြစ်သည်။ ချိတ်ဆက်ထားသော LED နှင့် မီးများကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေး အဖွင့်/အပိတ် ရရှိစေရန် ခလုတ်သည် Tuya/Smart life အက်ပ်ကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်၌ အဖွင့်/ပိတ်ရန် အချိန်ဇယားကိုလည်း သတ်မှတ်နိုင်သည်၊ ဖုန်းတစ်လုံးမှ ထိန်းချုပ်ရုံသာမက အတူတကွ ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် သင့်မိသားစုနှင့် မျှဝေနိုင်ပါသည်။ Amazon Alexa ဖြင့် ပြီးပြည့်စုံစွာ အလုပ်လုပ်ပါ၊ Google အိမ်ကို သင့်အသံဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
2. Smart Home Light Wifi Switch ၏ ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ
ထုတ်ကုန်အမည် Wifi စမတ် ထိတွေ့ခလုတ်
hot Tags:: Smart Home Light Wifi Switch၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာသော၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်